बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्दै, यी हुन् मुख्यमन्त्रीका अनुहार ! « Ok Janata Newsportal
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्दै, यी हुन् मुख्यमन्त्रीका अनुहार !
काठमाडौं । नेकपाको विवादका कारण बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको हातमा सत्ता जाने संकेत देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई स्थीर बनाइराख्न कांग्रेसले भूमिका खेल्ने निष्कर्ष बागमती प्रदेशमा सरकार गठन हुन लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)ले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बागमती प्रदेशमा नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षमा ४५ जना, ओली पक्षमा ३५ जना र कांग्रेसका २२ जना सांसद छन् । विवेकशीलका ३ जना, राप्रपाका २ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सरकार बनाउनका निम्ति कांग्रेसले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । कांग्रेस सरकारमा नगए नेकपाका दुवै पक्ष अल्पमतमा पर्नेछन् । नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने पनि बताइरहेका छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षले आफूहरुलाई साथ दिन कांग्रेसलाई भनेको छ, भने ओली पक्षले आफू तर्फ कांग्रेसलाई रिझाउन खोजिरहेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई कांग्रेसले साथ दिने छैन ।
उनीहरुले दाहाल–नेपाल पक्षलाई साथमा लिएर सत्ता सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता ईन्द्र बानियाँ छन् । श्रेष्ठले भने, ‘ईन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भइसक्यो ।’
नेपाल पक्ष अर्को दल दर्तामा लागेसंगै ओली थप आक्रामक
खनाल-नेपालको नयाँ दल : यस्तो बन्नेछ नाम र चुनाव चिन्ह
जसपाले ओलीसंग गर्यो फाइनल डिल, यस्तो छ अन्तिम सम्झौता
एकैदिन ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि १० दिन लकडाउन
रेष्टुरेन्ट र डान्सबार बन्द गर्न निर्देशन, लकडाउन कार्यतालिका
प्रधानमन्त्रीको फोन आयो भन्दै ललितपुरबाट दौडिए प्रचण्ड
मंगलबार सार्वजनिक विदा
सर्वोत्तम सिमेन्टको ५० कित्ता सबैलाई पर्ने आइपिओ खुल्ने
काठमाडौंलगायत १४ जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देशन